Abadlali bebhola laseBrithani Abadlali be-Biogaphies kanye ne-Untold Childhood Stories
Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL
Abadlali bebhola abaqeqeshiwe abavela eNgilandi, eScotland, eWales naseNyakatho ne-Ireland bonke baneZindaba Zobuntwana kanye ne-Biography Facts. I-LifeBogger ilwela umzila wayo ongaguquki wokukutshela lezi zikhathi ezingenakulibaleka ezijabulisa futhi zithinta inhliziyo.
Kungani Izindaba Zobuntwana kanye ne-Biography yamaNgisi, amaScotland, amaWelsh kanye neNorth Ireland Footballers
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, sabona ukuthi abantu abaningi babukela ibhola lase-UK. Isibonelo, iWiki ibika ukuthi abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4.7 babukela iPremier League.
Abathandi, phakathi nangemva komdlalo ngamunye, bahlinzeka ngemibuzo eminingi ngabadlali ababathandayo. Ukubuza imibuzo eminingi mayelana nabathandi bebhola kunesikhathi, kudala igebe lolwazi kuwebhu yomhlaba wonke.
Ukuvala igebe leli, i-LifeBogger inqume ukuthi isungule umsebenzi wokuhambisa izindaba zezingane kanye namaqiniso we-Biography namaqiniso e-United Kingdom.
Ukugxila Kwethu Okuqukethwe Kwebhola le-United Kingdom
Konke okuqukethwe kwethu kulandela ilungiselelo elinengqondo futhi kwephulelwe kulezi zindawo ezilandelayo.
Ihlukanisa izithombe zobuntwana nokubeka ndawonye, ​​okuhlangenwe nakho kwempilo yakuqala yabadlali bebhola abaqeqeshiwe abavela e-UK.
Siphula imininingwane mayelana nesizinda semindeni, imvelaphi kanye nezimpande zabadlali bebhola abaqeqeshiwe abavela e-UK.
I-LifeBogger ikutshela ngemisebenzi yasekuqaleni kwezeMpilo eholele ekuzalweni kwemisebenzi yentsha yabadlali bebhola e-UK.
I-athikili yethu iqhubeka nokuletha okuhlangenwe nakho kweNtsha Yokunakekelwa Kwentsha ezikhungweni zayo ezifundwayo.
I-Road to Fame Story- Iveza ukuthi iTurning Point eyenze abadlali bebhola base-UK bazizwa sengathi bazophumelela.
Indaba yeRise to Fame- Siphula Indaba Yempumelelo kanye nesimo samanje Sodumo lwabadlali bebhola e-UK.
Iqembu elingavumbululanga amaqiniso mayelana ne- “Uthando Lothando” labadlali abasebenza kahle e-UK. Kalula nje, sembula kuwe Amantombazane abo Abangane noma Amakhosikazi.
Siphinde futhi siye emaqinisweni angavezi maqondana namaLife ama-Footballers ase-UK.
Sikwenza ujwayelane namalungu emindeni yabo kanye nobudlelwano abanabo omunye komunye.
Iqembu lethu lembula iMholo, i-Net ebaluleke kakhulu futhi ikutshele ukuthi abadlali bebhola lase-UK bachitha kanjani imali yabo (ama-Lifestyle Amaqiniso).
Okokugcina, sikulethela ama-Untold Amaqiniso ongakaze wazi ukuthi ukhona ngalezi zidlali zebhola ezinkulu.
Okwamanje, sidilize isigaba se-United Kingdom saba ngezigatshana ezilandelayo.
Abadlali bebhola lezinyawo e-England
Ngokufigqiwe, I-Lifebogger ikholelwa emcabangweni wokufaka isisekelo solwazi lwabalandeli ngokuqondene Izindaba Zobuntwaneni futhi Amaqiniso we-Biography zebhola lezinyawo laseBrithani.
Sithokozela ukwesekwa kwakho ekuhlelweni kwethu okungaguquki kokuhambisa izindaba ezikhuluma ngabadlali bebhola. Sikholwa ukuthi akuyona yonke into ngokubuka ibhola noma ibhola lezinyawo kepha ukwazi kabanzi ngabadlali abanikela ngokusemandleni abo, usuku nosuku ukuphuma kwegama.
Ithimba lethu labahleli lilwela ukulingana nokunemba ngendlela ejwayelekile yokuhambisa izindaba zebhola. Ngiyacela Xhumana nathi uma ubona noma yini engalungile kunoma yikuphi kwendatshana yethu kulesi sigaba.
Manje ngaphandle kokunye, ake siqale nge-Childhood Stories kanye ne-Biography Facts of Footballers (abadlali bebhola) abavela e-United Kingdom.